Xeer ilaaliyaha Guud ee qaranka Soomaaliyeed oo la kulmay jaaliyada Columbus Ohio “Sawirro – Radio Muqdisho
Xeer ilaaliyaha Guud ee qaranka Soomaaliyeed oo la kulmay jaaliyada Columbus Ohio “Sawirro
Xeer ilaaliyaha Guud ee qaranka Soomaaliyeed Dr. Ahmed Ali Dahir oo gaaray magaalada Columbus ayaa waxa uu kulan la qaatay Jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio ee dalka Maraykanka, waxana uu warbixin ku saabsan arimaha Soomaaliya uu siiyay Jaliyada oo aad ugu xiiso qabtay in ay waxbadan ka ogaadaan dalkooda iyo marxalada uu ku suganyahay.
Waxa uu xeer ilaaliyuhu aad uga hadlay arimaha la xariira Garsoorka iyo howlaha xafiskiisa kaas oo ah mid aad u mugweyn, isla markaana ah laf dhabarta Garsoorka iyo Cadaalada Dalka.
Kulanka oo aad loogu qiirooday kana ilmaysiisay inta badan dadka kulanka goob jooga ka ahaa kadib markii laga sheekeeyay marxalada uu dalku ku jiro iyo sida iminka wax un uu soo hagaagaya
Rajo aad u wanaagsan ayuu gabi ahaan dalka ka muujiyay isaga oo ka sheekeeyay in dalka ay ka jiraan isbadalo waxbarasho, Caafimaad, Ganacsi iyo waxyaaba kale oo gaar loo leeyahay kuwaas oo kaabay shacabka dagaaladu soo daashadeen gaar ahaan magaalada Caasimada ee Muqdisho.
Xeer ilaaliyaha ayaa dul istaagay arrimaha Dhalinyarada oo uu sheegay in ay yihiin kuwa tiigsanaya horumar waxbarasho iyo shaqo meel fiican gaartay, waxa uu xusay in ay adkaan doonto in dhalinta qurbaha ay shaqo helaan xili dhalintii gudaha dalka ay waxbarasho dhaxal gal ah ka soo baxeen, kuwana ka soo baxayaan.
Garsoorka ayuu xusay Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr. Ahmed Ali Dahir in qabyo weyn ay ka jirto iyada oo waxyaabaha lagu baaro dambiyada iyo dadka baara aysan haysan qalab ku filan, tusaale qalabka loo bahanyahay waxaa ka mid ah, midka lagu baaro ama cadaynaya raga Kufisiga gaysta, baaritaanka dhaqtarka kaliya ma’ahan mid nagu filan hadaan cadayn lahayn, waxaa ka mid ah in la helo qalabka faraha oo casri ah iyo dad u tabo baran.
Xabsiyada dalka ayuu tilmaamay Dr. Ahmed Ali Dahir in ay yihiin kuwo aad ugu baahan dayactir iyo in dib loo habeeyo xili xaalado aad u adag ay ka jiraan xabsiyada, oo tiradii loogu talo galay ka badan ay ku jiraan, Tusaale qol loogu talo galay in lagu xiro, 12 qof waxaa ku jirta 50 ama 60 ruux waxayna sababtaa in ay dadku qaar dhintaan una dhintaan cariiri, waxa uu xusay Magaalada Bayhabo in dhawaan 2 maxbuus u dhinteen cariiri ka soo wajahay qolka kadib markii tiro aan loogu talo galin lagu xareeyay.
Magaalooyinka, Baydhabo, Muqdisho, Kismaayo iyo kuwo kale ayaa u bahan dib u dhis xabsi.
Waxa uu arrinta xabsiyada ka muujiyay walaac aad u xun oo cafimaad la’aan iyo dhismayaasha oo duqoobay ah, waxana uu jaaliyada ka codsaday in aysan sugin wadamo shisheeye ee ay wax ka qabtaan oo gacan ka gaystaan sidii dib loogu habayn lahaa xabsiyada.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxa uu ka sheekeeyay in xarunta xeer ilaaliyaha markuu imaanayay ay ahayd meel aad u dayacan, balse maanta ay ka fiicantahay shalay, walina ay u bahany ihiin isbadal dhan walbaa, iyaga oo ku tashanaya dadkooda iyo ganacsatadooda.
Qadiyada Badda Soomaaliya
Inbadan ayuu ku dheeraaday arrimaha dadku wax iska weydiiyaan ee xaduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya isaga oo dadka u sharaxay sida Runtaa ee wax u jiraan iyo in xaalada badda ay meel fiican mareyso islamarkaana aysan ogolaan doonin in taako ka mid ah bada Somalia la qaato.
Waxa uu ahaa kulan aad u xiiso badan islamarkaana laga dhaxlay xog waraysi qoto dheer, waxana uu horay u soo maray Soomaalida Minnesota oo sidan oo kale uu ula soo kulmay.
Sawir Qaade:- Wariyaha Warbaahinta Qaranka Ee Dalka Mareykanka Deeqo Shire (SONNA)